Ciyaartoy feer ku qaad qaaday Garsoore kubada cagta & warar xiiso leh (VIDEO) – SBC
Ciyaartoy feer ku qaad qaaday Garsoore kubada cagta & warar xiiso leh (VIDEO)
Posted by editor on Aktoober 28, 2011 Comments
Mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu caansan kubada cagta wadanka Jamhuuriyada Maldova ee horey uga mid aheyd Jamhuuriyadii burburtey ee midowga Soofiyeeti una dhaxeysa wadamada Romania & Galbeedka Ukraine ayaa arin qosol iyo amakaaga leh ka dhigay garoon kubada cagta oo dalkaasi ku yaal ka dib markii uu feer laqsiiyey garoore ciyaar dhexdhexaadinayey.
Ciyaaryahan Julian Bursuc oo khadka dhaxe uga ciyaara kooxda Sfintul Gheorge ayaa feeray garsoore Ghenadie Sidenco, isagoo ciyaaryahanku ka doodayey foul ama qalad loo dhigay kooxda kale ee Iskra-Stal oo xiligaasi ciyaarta ku hogaaminaysay 1-0.
Burcuc oo daqiiqadii 55-aad aad ula dooday garsooraha iyo waliba mid ka mid ah calan wadayaasha, waxaana xiligii uu feerayey garsooraha loo haystey in uu la doodayo calan wadaha balse isla markiiba isagoo dhinac taagan garooraha ayuu inta bahal feer isla kala jiiday wuxuu daanka ka qaaday referee-ga, iyadoo isla markiiba ay xaalada soo faragaliyeen ciidamada amaanka oo qabtey ciyaaryahan Julian Bursuc.
Julian Bursuc oo feer daanka ku jabiyey garsooraha
Garsoore Ghenadie Sidenco ayaa xaalada feerka la laqsiiyey wuxuu kula dhaqmay si degan, isagoon wax caro ah qaadin isla markaana isdajiyey oo dulqaad muujiyey.
Julian Bursuc 35 sano jir ah ayaa markii shilkaasi uu dhacay wuxuu muujiyey in uu aad uga xun yahay waxaana isla markiiba uu shaaca ka qaaday in uu gabi ahaanba isaga fariistey ciyaaraha uuna ku macsalaameyey falkaasi ka baxsan xeerarka kubada cagta.
Ciyaartaasi ayaa ku soo dhamaatey 3-0 iyadoo ciyaaryahankaasi loo aaneynayo in uu guuldaradaasi sabab u noqdey, isla markaana uu kubada cagta ku sagootiyey taariikh xun.
Falalka caynkan oo kale ah ee ay geysanayaan ciyaartoyda ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey soo kordhaya, iyadoo todobaadkii hore mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Maccabi Tel-Aviv ee Isra’il ka dhisan oo lagu magacaabo Yoav Ziv uu kabtiisa ku tuurey calan wade Christos Akrivos oo kubad sheeda ka baxdey gudoonsiiyey kooxda Stoke City ee England ka dhisan oo ay wada ciyaarayeen kulan ka mid ah Europe Leageu-ga.
Yoav Ziv oo kabtiisii ku laaday calan wadaha
Ciyaaryahan Youv ayaa la siiyey kaarka cas iyadoo kulankaasi ay 3-0 ay ku adkaatey kooxda Stoke.
Dhacdo kalena bishii August ee sanadkan kulan ka mid ah ahaa koobka kooxaha heerka labaad ee dalka Brazil ayaa ciyaaryahan Rildo oo ka mid ah kooxda Victoria wuxuu laad ku qaaday garsoore dhex dhexdhexadinayey kulanka Victoria & Boa Esporte Clube ka dib markii ciyaaryahanka la siiyey kaarka cas(Red Card).
Ciyaaryahan Rildo oo garsooraha laad ku qaaday sidii kubadii
Ciyaaryahan Rildo oo ay qalad ku galeen daafacyada kooxda Boa ayaa filayey in garsooruhu uu u dhigo laad xor ah (free kick) balse garsoorihii uu ciyaarta ka dhigay mid socota oo aan wax qalad ah dhicin, Rildo ayaa arintaasi ka carooday waxaana uu kubadii ku tuuray garsooraha taasi oo xabadka kaga dhacdey waxaana la siiyey kaarka Jaalaha, balse isla markiiba wuxuu taasi kaga jawaabay caro iyo in uu garooraha gacanta ku tuuro, iyadoo garsoorihiina si fudud oo aan dulqaad ku jirin uu kaar kale oo Jaalle ah u taagey sidaasina uu ku qaatey kaarka cas.
Ciyaaryahan Rildo ayaa laga ganaaxay ciyaarta kubada cagta mudo 6 bilood ah taasi oo ah ciqaab la xiriirta falka uu ku dhaqaaqay.
Link-ga VIDEO hoose ka daawo qaabkii feerka daanka loo jabiyey garsooraha.HALKAN KA DAAWO VIDEO
Aktoober 28, 2011 at 8:57 pm
waan ku faraxsanahah ninkaa feerka daanka lagu jabshay